Verge စျေး - အွန်လိုင်း XVG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Verge (XVG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Verge (XVG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Verge ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $63 971 441.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Verge တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Verge များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VergeXVG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0073VergeXVG သို့ ယူရိုEUR€0.00622VergeXVG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00558VergeXVG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00669VergeXVG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0658VergeXVG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0463VergeXVG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.163VergeXVG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0273VergeXVG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00974VergeXVG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0102VergeXVG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.164VergeXVG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0566VergeXVG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.04VergeXVG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.547VergeXVG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.23VergeXVG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.01VergeXVG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.011VergeXVG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.227VergeXVG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0508VergeXVG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.775VergeXVG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩8.65VergeXVG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.83VergeXVG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.536VergeXVG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.202
VergeXVG သို့ BitcoinBTC0.0000006 VergeXVG သို့ EthereumETH0.00002 VergeXVG သို့ LitecoinLTC0.000126 VergeXVG သို့ DigitalCashDASH0.00008 VergeXVG သို့ MoneroXMR0.00008 VergeXVG သို့ NxtNXT0.554 VergeXVG သို့ Ethereum ClassicETC0.00105 VergeXVG သို့ DogecoinDOGE2.08 VergeXVG သို့ ZCashZEC0.00008 VergeXVG သို့ BitsharesBTS0.27 VergeXVG သို့ DigiByteDGB0.231 VergeXVG သို့ RippleXRP0.0245 VergeXVG သို့ BitcoinDarkBTCD0.000247 VergeXVG သို့ PeerCoinPPC0.0236 VergeXVG သို့ CraigsCoinCRAIG3.26 VergeXVG သို့ BitstakeXBS0.305 VergeXVG သို့ PayCoinXPY0.125 VergeXVG သို့ ProsperCoinPRC0.899 VergeXVG သို့ YbCoinYBC0.000004 VergeXVG သို့ DarkKushDANK2.3 VergeXVG သို့ GiveCoinGIVE15.5 VergeXVG သို့ KoboCoinKOBO1.63 VergeXVG သို့ DarkTokenDT0.00673 VergeXVG သို့ CETUS CoinCETI20.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 06:45:02 +0000.